သန်း ကြွယ် သူဌေး တချို့သာ ဝယ်ပတ် နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ဈေး အကြီး ဆုံး နာရီ များ – Cele Posts
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ( ဒါမှမဟုတ် ) နာမည်ကျော်ကြား တဲ့သူတွေ ရဲ့ အပြင်အဆင် တွေထဲမှာ နာရီဆိုတာ ကလည်း မပါမဖြစ်လို့တောင် ပြောရမှာပါ ။ ဒါ့ကြောင့် အခုတစ်ခါ မှာတော့ နာရီကို စွဲလန်း ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက် ကမ္ဘာပေါ်က ဈေးအကြီးဆုံး နာရီ အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ဘယ်လို နာရီတွေ ပါမလဲ ဆိုတာ ကတော့ အောက်က ပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ။
၁။ GRAFF DIAMONDS HALLUCINATION ( ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း )ကမ္ဘာ့ဈေး အကြီးဆုံး နာရီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ( ၁ ) နေရာမှာ ရှိနေတာကတော့ GRAFF DIAMONDS HALLUCINATION ဆိုတဲ့ နာရီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒီနာရီကိုတော့ Baselworld ဆိုတဲ့ လက်ပတ် နာရီနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ပြပွဲမှာ စတင်မိတ်ဆက် ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာရီ တစ်ခုလုံးကို စိန် (၁၁၀) ကာရက် နဲ့ တန်ဆာဆင်ပေး ထားပြီး စိန်အရောင်ပေါင်း များစွာထည့် ပေးထားတာကြောင့် အလင်းရောင် ထဲရောက် သွားရင် တလက်လက်နဲ့ တောက်ပနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂။ GRAFF DIAMONDS THE FASCINATION ( ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ )နံပါတ် ( ၂ ) နေရာမှာတော့ GRAFF DIAMONDS THE FASCINATION ဆိုတဲ့ နာရီလေးက နေရာယူထားပါတယ်။ ဒီနာရီလေးကိုတော့ စိန် ၁၅၂.၉၆ ကာရက်ပါဝင်ပြီး အလယ်တည့်တည့်က စိန်ရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ ၃၈.၁၄ ကာရက် အလေးချိန် ရှိပါတယ် ။ အလယ်တည့်တည့်က စိန်က ဘယ်လောက် တောင် ကြီးလဲဆိုရင် လက်စွပ်ထဲ ထည့်ပြီးတောင် ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်တဲ့ ။ ဒီနာရီလေးမှာတော့ အပေါ်က နာရီမှာလိုမျိုး စိန် အရောင်မျိုးစုံ မပါတော့ပဲ အရောင် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ သာ ဒီဇိုင်း ဖော်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
၃။ BREGUET NO. 160 ( ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ )နောက်ထပ် ဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ နံပါတ် ( ၃ ) နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ Breguet No. 160 ဆိုတဲ့ နာရီလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနာရီလေးကတော့ ရှေးဟောင်းနာရီတစ်လုံး ဖြစ်ပြီး ဆွစ်ဇာလန် လူမျိုး Abraham-Louis Breguet ဆိုသူက ဘုရင်မ Marie-Antoinette အတွက် ၁၇၈၂ ခုနှစ်မှာ စတင် ဖန်တီးပေး ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း အပြီး မသတ်နိုင်ခဲ့ပဲ ဘုရင်မ Marie-Antoinette ကွပ်မျက် ခံရပြီး ၁၈၇၂ ခုနှစ် ရောက်မှသာ Breguet ရဲ့ သားဖြစ်သူက ဒီနာရီလေးကို အပြီးသတ် ဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစောပိုင်းတုန်းကတော့ ဒီနာရီလေး ကို ဂျေရုစလင်မြို့က ပြတိုက်တစ်ခုမှာ ပြသထားခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ခိုးယူခံလိုက် ရပါသေးတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ကာ ပြုပြင်မွမ်းမံ ခဲ့ပြီး Mayer လို့ခေါ်တဲ့ ပြတိုက်မှာ ယနေ့အချိန် အထိ ပြသထားပါတယ် ။
၄။ CHOPARD 201 ( ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း )ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နာရီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ( ၄ ) နေရာမှာ ရှိနေတာကတော့ CHOPARD 201 ဖြစ်ပြီး Carat Watch လို့ ခေါ်ကြပါတယ် ။ ဒီနာရီ ကိုတော့ အရောင်စုံလင်လှတဲ့ စိန် အလုံးပေါင်း (၈၇၄ ) လုံးနဲ့ ပုံဖော်ပေး ထားပြီး စိန်အားလုံးရဲ့ အလေးချိန်ဟာ (၂၀၁ ) ကာရက် ရှိပါတယ်တဲ့ ။ Chopard နာရီရဲ့ အလယ် တည့်တည့်မှာ အဝါ ၊ ပန်းရောင် နဲ့ အပြာ ရောင် အသည်းပုံစံ စိန် ( ၃ ) လုံး ထည့်ပေးထားပါသေးတယ် ။
၅။ PATEK PHILIPPE SUPERCOMPLICATION ( ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း )ဒီနာရီလေး ကတော့ အိတ်ဆောင်နာရီ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၃၃ ခုနှစ်တုန်းက Patek Philippe ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်းပညာရှင် တစ်ယောက်ဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Henry Graves Jr အတွက် ဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာရီရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးဖို့အတွက် အချိန် ( ၅ ) နှစ်မျှ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး features ပေါင်း ( ၂၅ ) ခုလောက် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ။
၆။ JACOB & CO. BILLIONAIRE WATCH ( ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း )The Billionaire watch လို့ ခေါ်တဲ့ နာရီမှာတော့ ၂၆၀ ကာရက်ရှိတဲ့ စိန်တွေကို ထည့်သွင်း ပေးထားပြီး စိန်အလုံးပေါင်း ၁၆၇ လုံး ပါဝင်ကာ တစ်ခြားသော ကျောက်မျက်ရတနာ ( ၁၉ ) ခုလည်း ပါပါ သေးတယ် ။ နာရီရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ လက်ပတ်ကြိုး ကိုတော့ ရွှေဖြူ 18k နဲ့ တန်ဆာဆင် ထားပါတယ် ။ အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး နာရီတွေ အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သနျး ကွှယျ သူဌေး တခြို့သာ ဝယျပတျ နိုငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ ဈေး အကွီး ဆုံး နာရီ မြား
အောငျမွငျတဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျ ( ဒါမှမဟုတျ ) နာမညျကြျောကွား တဲ့သူတှေ ရဲ့ အပွငျအဆငျ တှထေဲမှာ နာရီဆိုတာ ကလညျး မပါမဖွဈလို့တောငျ ပွောရမှာပါ ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခုတဈခါ မှာတော့ နာရီကို စှဲလနျး ကွိုကျနှဈသကျသူတှေ အတှကျ ကမ်ဘာပျေါက ဈေးအကွီးဆုံး နာရီ အခြို့ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော ။ ဘယျလို နာရီတှေ ပါမလဲ ဆိုတာ ကတော့ အောကျက ပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီကို ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော ။
၁။ GRAFF DIAMONDS HALLUCINATION ( ဒျေါလာ ၅၅ သနျး )ကမ်ဘာ့ဈေး အကွီးဆုံး နာရီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ( ၁ ) နရောမှာ ရှိနတောကတော့ GRAFF DIAMONDS HALLUCINATION ဆိုတဲ့ နာရီပဲ ဖွဈပါတယျ ။ဒီနာရီကိုတော့ Baselworld ဆိုတဲ့ လကျပတျ နာရီနဲ့ လကျဝတျရတနာ ပွပှဲမှာ စတငျမိတျဆကျ ပွသခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ နာရီ တဈခုလုံးကို စိနျ (၁၁၀) ကာရကျ နဲ့ တနျဆာဆငျပေး ထားပွီး စိနျအရောငျပေါငျး မြားစှာထညျ့ ပေးထားတာကွောငျ့ အလငျးရောငျ ထဲရောကျ သှားရငျ တလကျလကျနဲ့ တောကျပနမှောပဲ ဖွဈပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
၂။ GRAFF DIAMONDS THE FASCINATION ( ဒျေါလာ သနျး ၄၀ )နံပါတျ ( ၂ ) နရောမှာတော့ GRAFF DIAMONDS THE FASCINATION ဆိုတဲ့ နာရီလေးက နရောယူထားပါတယျ။ ဒီနာရီလေးကိုတော့ စိနျ ၁၅၂.၉၆ ကာရကျပါဝငျပွီး အလယျတညျ့တညျ့က စိနျရဲ့ အလေးခြိနျကတော့ ၃၈.၁၄ ကာရကျ အလေးခြိနျ ရှိပါတယျ ။ အလယျတညျ့တညျ့က စိနျက ဘယျလောကျ တောငျ ကွီးလဲဆိုရငျ လကျစှပျထဲ ထညျ့ပွီးတောငျ ဝတျဆငျလို့ရပါတယျတဲ့ ။ ဒီနာရီလေးမှာတော့ အပျေါက နာရီမှာလိုမြိုး စိနျ အရောငျမြိုးစုံ မပါတော့ပဲ အရောငျ တဈမြိုးတညျးနဲ့ သာ ဒီဇိုငျး ဖျောပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
၃။ BREGUET NO. 160 ( ဒျေါလာ သနျး ၃၀ )နောကျထပျ ဖျောပွပေးမှာ ကတော့ နံပါတျ ( ၃ ) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ Breguet No. 160 ဆိုတဲ့ နာရီလေးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီနာရီလေးကတော့ ရှေးဟောငျးနာရီတဈလုံး ဖွဈပွီး ဆှဈဇာလနျ လူမြိုး Abraham-Louis Breguet ဆိုသူက ဘုရငျမ Marie-Antoinette အတှကျ ၁၇၈၂ ခုနှဈမှာ စတငျ ဖနျတီးပေး ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လညျး အပွီး မသတျနိုငျခဲ့ပဲ ဘုရငျမ Marie-Antoinette ကှပျမကျြ ခံရပွီး ၁၈၇၂ ခုနှဈ ရောကျမှသာ Breguet ရဲ့ သားဖွဈသူက ဒီနာရီလေးကို အပွီးသတျ ဖနျတီးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ အစောပိုငျးတုနျးကတော့ ဒီနာရီလေး ကို ဂရြေုစလငျမွို့က ပွတိုကျတဈခုမှာ ပွသထားခဲ့ပွီး ၁၉၈၃ ခုနှဈမှာ ခိုးယူခံလိုကျ ရပါသေးတယျ ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ ပွနျလညျရရှိခဲ့ကာ ပွုပွငျမှမျးမံ ခဲ့ပွီး Mayer လို့ချေါတဲ့ ပွတိုကျမှာ ယနအေ့ခြိနျ အထိ ပွသထားပါတယျ ။
၄။ CHOPARD 201 ( ဒျေါလာ ၂၅ သနျး )ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး နာရီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ( ၄ ) နရောမှာ ရှိနတောကတော့ CHOPARD 201 ဖွဈပွီး Carat Watch လို့ ချေါကွပါတယျ ။ ဒီနာရီ ကိုတော့ အရောငျစုံလငျလှတဲ့ စိနျ အလုံးပေါငျး (၈၇၄ ) လုံးနဲ့ ပုံဖျောပေး ထားပွီး စိနျအားလုံးရဲ့ အလေးခြိနျဟာ (၂၀၁ ) ကာရကျ ရှိပါတယျတဲ့ ။ Chopard နာရီရဲ့ အလယျ တညျ့တညျ့မှာ အဝါ ၊ ပနျးရောငျ နဲ့ အပွာ ရောငျ အသညျးပုံစံ စိနျ ( ၃ ) လုံး ထညျ့ပေးထားပါသေးတယျ ။
၅။ PATEK PHILIPPE SUPERCOMPLICATION ( ဒျေါလာ ၂၄ သနျး )ဒီနာရီလေး ကတော့ အိတျဆောငျနာရီ အမြိုးအစားဖွဈပွီး ၁၉၃၃ ခုနှဈတုနျးက Patek Philippe ဆိုတဲ့ ဒီဇိုငျးပညာရှငျ တဈယောကျဟာ ဘဏျလုပျငနျးရှငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ Henry Graves Jr အတှကျ ဖနျတီးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နာရီရဲ့ ဒီဇိုငျးကို ဖနျတီးဖို့အတှကျ အခြိနျ ( ၅ ) နှဈမြှ ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီး features ပေါငျး ( ၂၅ ) ခုလောကျ ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ ။
၆။ JACOB & CO. BILLIONAIRE WATCH ( ဒျေါလာ ၁၈ သနျး )The Billionaire watch လို့ ချေါတဲ့ နာရီမှာတော့ ၂၆၀ ကာရကျရှိတဲ့ စိနျတှကေို ထညျ့သှငျး ပေးထားပွီး စိနျအလုံးပေါငျး ၁၆၇ လုံး ပါဝငျကာ တဈခွားသော ကြောကျမကျြရတနာ ( ၁၉ ) ခုလညျး ပါပါ သေးတယျ ။ နာရီရဲ့ မကျြနှာပွငျနဲ့ လကျပတျကွိုး ကိုတော့ ရှဖွေူ 18k နဲ့ တနျဆာဆငျ ထားပါတယျ ။ အခုဖျောပွပေးထားတာကတော့ ကမ်ဘာပျေါက တနျဖိုးအကွီးမားဆုံး နာရီတှေ အကွောငျးကို စုစညျးဖျောပွပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဆေးရုံ တွေ ဘယ်လောက် ထပ်ဆောက် နေပါ‌စေ ဒီနှစ် ချက် ကို မလိုက် နာရင် ကိုဗစ် ကို လုံးဝ အနိုင် မရနိုင်